Aluminum Window Chinovhara - China Hebei Samsung Metal Wire Mesh
Aluminum hwindo chidzitiro chakagadzirwa al-MG chiwanikwa waya pachena kurukiswa. Aluminum waya pajira riya inowira makirasi maviri: Aluminum magnesium chiwanikwa waya pajira riya uye akachena aruminiyamu waya pajira riya, yakarukwa nezvinhu oga pamwe aruminiyamu chiwanikwa waya uye akachena aruminiyamu waya. Al mosquito sikirini Color: Silver yakajeka kana nemarasha. Aluminum chiwanikwa Insect Screening iri iyo yaidhura kupfuura Washington City Offices Mesh asi zvikuru yakasimba. Aluminum kuongorora zviri yakaoma uye hunogara, yemanyorero muna 18 X 16 pajira riya, 0,011 dhayamita kuongororwa, dzakakodzera ...
Supply Mano: 5000 Sheet / Sheets por Day
Aluminum hwindo chidzitiro chakagadzirwa al-MG chiwanikwa waya pachena kurukiswa.
Aluminum waya pajira riya inowira makirasi maviri: Aluminum magnesium chiwanikwa waya pajira riya uye akachena aruminiyamu waya pajira riya , yakarukwa nezvinhu oga pamwe aruminiyamu chiwanikwa waya uye akachena aruminiyamu waya.
Al mosquito sikirini Color: Silver yakajeka kana nemarasha.
Aluminum chiwanikwa Insect Screening iri iyo yaidhura kupfuura Washington City Offices Mesh asi zvikuru yakasimba.
Aluminum kuongorora zviri yakaoma uye hunogara, yemanyorero muna 18 X 16 pajira riya, 0,011 dhayamita kuongororwa, akakodzera vakawanda mukova uye hwindo zvikumbiro. Aluminum hwindo chidzitiro haangavi ngura kana nokuora. Akapa mu mabhanzi kana akaputswa-putswa.
Zvipembenene pajira riya rine chiedza uremu, chakanaka ngura kuzvidzivirira uye ngura nemishonga
Application: Sezvo zvipembenene kuongororwa kana mumvuri pamusoro nenhunzi uye mosquito, michina dziviriro, kufefetedza zvokunyama uye kugamuchira anonongedzera.
Nesuwo kupa zvipembenene pajira riya mugadziriro, ayo akanyorerwa kuna mahwindo uye madhoo, uye akakwana vaviri nezvipfuwo uye bhizimusi kushandiswa.
Zviri nyore kuisa zvipembenene pajira riya?
Zvipembenene pajira riya riri nyore chaizvo kuisa. mhando edu ose kunogona kubviswa pamwe simba chigero, uye ipapo anongoti stapled kana glued panzvimbo.
Rini kambuyu pajira riya yakareba?
The hunotarisira zvipembenene pajira riya upenyu achavaponesa acho akashandiswa, uye kakawanda sei zviri pasi kupfeka uye kukuvara. Zvikuru nesimba-kupfeka pajira riya isu tengesa kuti yakagadzirwa nesimbi, uye ichi ndicho inowanika kana Stainless simbi kana aruminiyamu.
Our Washington City Offices uye PVC zvemapuranga simbi pajira riya vari isingadhuri inotsiva, asi vanopedzisira vava akatunhidzwa uye vanofanira chete kushandiswa mumba. Zvisinei, redu dzinovaraidza pajira riya akasimba zvikuru uye akaita kubva polyester ane zvinhu zvenaironi core.
Musiyano uri pakati kuwedzerwa uye rakarukwa zvipembenene pajira riya ?
Zvikuru nyore, akawedzera pajira riya akasimba uye anochengeta chimiro chayo kana anokotama, nepo rakarukwa pajira riya riri nyore kucheka uye mukotamise kubva chimiro.
Ndingawana kupi kutenga zvipembenene pajira riya?
Kana uchida chero rubatsiro kutenga yako ndapota usazeza runhare kwatiri pamusoro 0086-311-69013206 kana taura nesu Via tsambambozha kana paIndaneti.
Next: Kwakakurudzira Welded Gabion Mesh
Aluminum Window Chinovhara
Electro kwakakurudzira Wire